भक्तजनको गडगडाहट पर्खंदै पशुपतिको सुनसान गङ्गा आरति - ParyatanBazar.com
भक्तजनको गडगडाहट पर्खंदै पशुपतिको सुनसान गङ्गा आरति
भदौ २३ ,काठमाडौँ। जटा टवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलेऽव लम्ब्यलम्बितां भुजंगतुंग मालिकाम्।
यो शिब ताण्डब स्त्रोतम घन्किना साथ सयौंका संख्यामा उपस्थित भएका आरति प्रेमिका तन मन सब मन्त्रमुग्ध हुन्छन र नाच्न थाल्छन आफ्नै सुरमा ! कोहि ताण्डब नृत्य स्टाइल मा नाच्छन , कोहि आफ्नै स्टाइलमा त कोहि तालि पड्काएर पुग्छन छुट्टै दुनियामा ! पशुपतिनाथको बागमती किनारमा हुने गंगा आरतिको क्रेज छोटो समयमा अत्यन्तै बढेको छ। दिनभरको कार्यालयको थकाई पछि होस् वा आफुलाई परेको ठुलै समस्या , प्रेमीको बिछोड मा टुटेको मन होस् या आफ्ना परमलाई चितामा दागबत्ती दीदैको पल । सबको मनलाई शान्ति दिने अनमोल क्षण बनेको छ गङ्गा आरति या भनौ सन्ध्याकालीन आरतिको १ घण्टा !
पशुपतिनाथ मन्दिर एक जीवन्त सम्पदा बनेको छ । जन्म देखि मृत्यु सम्मका संस्कार सम्पन्न गरिने यस पावन स्थलमा वागमती नदीले यसको महिमा अझै बढाएको छ ।एकतर्फ मृत्यु लाई अंगालेर आएका लासहरु , लास संगै बिदामा सुनिएका रोदनका आवाज र गंगामै समाहित भएका आफन्तका आँशुहरु यो सबैका बिचमा एउटा धुन बज्छ । जहाँ बिथोलिएका मनहरु शान्त बन्छन्। ईश्वरको अस्तित्व अस्वीकार गर्नेहरु पनि एकटक भएर अडिन्छन्। यसको एक मात्र कारण हो पशुपतिनाथको बागमती किनारमा हुने आरति , जसको जति बखान गरे पनि कमै लाग्छ , अधुरै लाग्छ ,अझ भन्नु पर्दा शब्द कम नै पर्छ। गंगा आरति ३ जना ब्राम्हणद्वारा प्रत्येक साँझ सम्पन्न हुनेगर्दछ । उक्त आरती हेर्न भक्तजनहरुको घुइंचो लाग्ने गरेको छ। त्यहाँ जाने जोकसैलाई संगीतको तालमा आरती गर्नेह ब्राम्हणरुको हातमा रहेको तैलदीपबाट निस्किरहेको धुवाँ, भजन र शंखघोषको ध्वनि, शिवमा समर्पित भक्तजनका भावभंगिमा अलौकिक र जादुमयी प्रतीत हुन सक्छ।
तर आजभोली न रोदनलाइ शान्ति छ , न मृत्यु अंगालेर आएक सासबिहिन लासलाई नमन गर्ने कुनै धुन नै गुन्जिन्छ। सुनसान छ पशुपतिनाथ अनि एक्लो , आधा र अधुरो बनेको छ आरति। शुन्यता छाएको छ पशुपतिमा आजभोली। आजभोली भन्दा पनि करिब ६ महिना बितिसक्यो पशुपतिनाथ सरगम बिहिन बनेको ! गङ्गा आरति त अहिले पनि हुन्छ तर यस आरतिले त्यतिको मन बुझाउन सकेको छैन जति पहिले बुझाउँथियो ।
संधै करिब एक घण्टामा सकिने आरति अहिले १० मिनेट मै सकिन्छ। एक ब्राम्हणले सम्पूर्ण ब्यबस्थापन गर्दै आरति गर्न तर्फ लाग्छन भने उनको पछि पछि एक जनाले आरतिमा गाइने , किर्तन , मंगलचरण , सरस्वति स्तोत्र ,महा आरति , शिब ताण्डब स्तोत्र , शिब पन्चचरण स्तोत्रम रुद्राष्टकम् , पुस्पान्जली, जयकार , किर्तन लगायतका भजनहरु गाउँदै जान्छन।
आरती स्थलमा डोरी टांगिएको छ , २/४ जना आरातिमा सम्मिलित मानिसहरु परै बाट आरति हेर्छन र फर्किन्छन। यी सबै समस्याको जड हो कोरोना भाइरस। कोरोनाले कुनै क्षेत्र बाँकी राखेको छैन तहस नहस गर्न, यसबाट बच्न सकेन भगवानले बास गरेको स्थान पशुपतिनाथ पनि। हेर्दा हेर्दै हजारौंमा पशुपति धाउने मान्छे आज भोलि घर बाटै , सामजिक संजाल मार्फत नै भन्ने गर्छन पशुपतिनाथले रक्षा गरुन।
गंगा आरतीको ब्यबस्थापनमा समेत समस्या देखिन थालेको आरति गर्ने एक ब्राम्हण भुवन चालिसेले पर्यटन बजारलाइ जानकारी गराए। ११ जना कर्मचारीबाट आरति ब्यबस्थापन गर्नेको संख्या घटेर ४ मा पुगेको छ भने आरति गर्ने ब्राम्हणको संख्या ३ बाट घटेर १ मा झरेको छ। अवस्था सामान्य भएपछी पुन दिनहुँ काममा फर्काइने सर्त सहित ७ कर्मचारीलाई बिदा दिइएको उनले बताए।
पहिले ३ जनाले आरति गर्दा छुट्टै रमाइलो र आनन्द लाग्ने चालिसे बताउछन् । एक्लैले म्युजिक बिना आरति गर्दा कता कता के नपुगेको जस्तो लाग्छ , उनले बताए। सबै जना हुँदा सबै काम मिलेर गर्थ्यौं खुशी लाग्थ्यो , हाल सबै ब्यबस्थापन एकलैले गर्नुपर्दा केहि अप्ठेरो हुने चालिसेको अनुभव छ। त्यो संगै सामान्य आरातिमा सयौंको भिड लाग्ने र भक्तजनले बजाएको तालीले नै थप उत्साह दिने गर्दथ्यो। भक्तजनको उपस्थिति ,तालि , गुरुजीको मिठो स्वर , बाध्यबाधकको सुरिलो धुन , आफ्नै पाराको नित्य ,भक्तजनको जयजयकार , बिदेशी पर्यटकको अव्यक्त खुशी सबैलाई मिस गरिरहेका छन् ब्राम्हण चालिसेले। हरेक दिन पालो गरेर एक ब्राम्हण आरतिमा पुग्छन। र संधै दोहोरिन्छ एकल र सुनसान आरति। चाडै कोरोना हट्ने र पुन : आरति पनि सामान्य अवस्थामा फर्किने र भक्तजनको पुरानै खुशीलाइ देख्न पाइनेमा आशावादी छन् उनि।
बच्चै देखि पशुपति वरपर खेलेर हुर्किएका चालिसेलाइ आर्यघाटमा लास देख्दा सामान्य लाग्छ। सुरु सुरुमा त डर लाग्थ्यो , अनेकौं प्रश्न मनमा खेल्थे तर जव दिनहुँ एउटै कुरालाई देखियो बानि पर्यो सायद , जन्मे पछि एक दिन सबैको मृत्यु निश्चित छ भन्ने। कहिलेकाहीं उनलाई जिन्दगी केहि रहेनछ जस्तो लाग्छ , जति गरेपनि आउनु यहीं छ ,कालले न धनि भन्दो रहेछ न गरिब ! जन्म देखि मृत्यु सम्मकै अनुभव गर्न सकिने स्थलका रुपमा उनि पशुपतिनाथलाइ बुझछन। अन्य स्थानमा जाँदा क्षणिक खुशी प्राप्त होला तर पशुपति यस्तो स्थान हो जहाँ फरक किशिमको आनन्द प्राप्त हुन्छ।
यसरि सुरु भयो आरती !
पशुपतीको यस आरति २०६४ साल श्रावण २१ गते बाट सुरु गरिएको थियो । तीन पुजारीले एकसाथ एक सुरमा शङ्ख फुक्छन्। बत्ती बाल्छन्, पूजा गर्छन्, धूप घुमाउँछन्। हरेक कुरा क्रमिक रुपमा हुन्छ जसको मज्जा आरती हेर्ने दर्शकले उठाउँछन्। ७ जनाको समूहले प्रति व्यक्ति १० हजार उठाएर सुरु गरेको समितिले यसरी विस्तारित रुप लिन्छ भन्ने अपेक्षा स्थापनाको लागि काम गरेका रमेश पोखरेल, दुर्गाप्रसाद खतिवडा, धर्मदास बुढाथोकी लगायत कसैले पनि राखेका थिएनन्। सबैको लक्ष्य एउटै थियो- एक किसिमको धार्मिक, आध्यात्मिक र सांगीतिक माहोल बनाउने। तर एउटा समूह सिङ्गो संस्था बन्यो।
सांगीतिक माहोल बीच गरिने यो आरती पशुपतिनाथको आरती भने होइन। पशुपतिनाथको आरती त मन्दिर भित्र हुन्छ। हरेक साँझ ६ देखि ६:३० कै बिचमा पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र वाद्यवादन बिना धूप र बत्ती घुम्छन्। धेरैले गंगा आरतीलाई नै पशुपतिनाथको आरती बुझ्ने गरेका छन्।पहिला पहिला पुर्णिमाको दिन ५ जना ब्राम्हणले आरति गर्ने चलन रहेको ब्राम्हण चालिसेले जानकारी दिए । हाल भने शिबरात्रि र बार्षिकोत्सब को दिन श्रावणको तेस्रो सोमबार ५ जना ब्राम्हणद्वारा आरति गर्ने गरिन्छ । यो आकर्षक गंगा आरतीले पर्यटक विकासमा पनि पक्कै केही योगदान पुर्याएको छ।